'नागरिकता नदिए भारतीयले छोरी दिदैनन भन्नु संकास्पद' | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७७ असार ११ गते ०७:२१
मधु कार्की । बच्चा जन्मेपछि न्वारानको नाम त छोरिको ७ दिनमा रे छोराको ११ दिनमा पुरेतले जुराउछन नेपालमा । अनि नेपालको नागरिकता जस्तो अत्यन्त संवेदनशील कुरा चाँहि डोलिमा चढेर ससुरालको आगन टेक्ने बित्तिकै पाउनु पर्छ भन्नुको उद्देश्य वास्तवमै के त ? नेपालका छोरीहरुले ससुराल देशमा यस्तो प्रेम र अधिकार पाएका छन त ? भन्ने चासो आफ्ना छोरिहरुको सवालमा सोच्ने गर्नु भएको छ आज सम्म ?
आफुले जन्माएका छोरिहरुको पहिले ख्याल गर्नुस । समानताको उदारबादी समाज छ, हाम्रो नेपाल । के नेपालका छोरिहरुले डोलिमा चढेर ससुराल जाने बित्तिकै नागरिता पाएका छन त ? समाज सुहाउदो अनि पाच्य कुरा गरौ । आफ्नै गरिमा अनि जनताले तपाइहरुको मुल्यांकन सगरमाथा बाट एक्कासी मरुभुमिमा झारेको राम्रो देखिन्न । केही दिन अगाडि राष्यृयताको मीठो खानी बर्सिएको तपाइहरुको मुखबाट कसरी यत्ती छिटो सन्कासपद अभिव्यक्तिमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ ?